28 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI), Erzincan မြို့ protocol ကိုနှင့် Corlu စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များဧည့်ခံ။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Erzincan ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီး၏ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူ Marmara ဝှမ်းမှာရှိတဲ့သစ်တစ်ခုမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး [ပို ... ]
အစဉ်အလာသြဂုတ်လ 27 31- Kars ၏နဝမပေါ်ရှိ "စာရင်းကိုင်အတွေးအခေါ်စခန်း" ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပစာရင်းကိုင်ပညာရှင်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်း (Modave), '' အထဲကယူသွားတတ်၏။ စာရင်းကိုင်ပညာရှင်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖောင်ဒေးရှင်း (Modave) [ပို ... ]
တူရကီရဲ့ဦးဆောင် e-commerce ပလက်ဖောင်း Hepsiburada, ကင်ပိန်းကားကိုယူချင်သူမြား၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ပြုံးလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ 28 10.00 Hepsiburada ရောင်းချခံရဖို့သြဂုတ်လနာရီန့်အသတ်တော့ရှယ်ယာ Egea Sedan Fiat မီးသတ်လွယ်ကူ 1.4 95 လက်စွဲစာအုပ် HP ကဓာတ်ဆီနဲ့မော်တော်ကားအတွက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အခွင့်အရေး [ပို ... ]
စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ပါလီမန်မေးခွန်းများတုံ့ပြန်မှုအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုGürer-တူရကီကားလမ်းခဲ့သည့် CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Nigde, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan ထံမှလာ၏။ ၎င်းတို့၏အလုပ်အကြား CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer, တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်, "Nigde-တူရကီအဝေးပြေးလမ်းမကြီး [ပို ... ]
Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 65 ကားမောင်းသူစုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုသတင်း duyurdu.al အခြေအနေများနှင့် application လိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်ကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်ပြုလိမ့်မည်။ IŞKUR Estrada ကျော်ထုတ်ဝေငါ၏အသစ်ကိုကြော်ငြာEskişehirမြူနီစီပယ်အလင်းရထားပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီး 65 ယာဉ်မောင်းများက [ပို ... ]
အဓိကဖြန့်ဖြူးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအစီအစဉ်ကို performance ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ Electro-လက်၌ Nexans တူရကီ, ဇူလိုင်လ 10 2019, MOBIWAY သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင်တန်းသားများကိုနှင့်နို့မှုစနစ်များနှင့်အတူမျှဝေ, တီထွင်ဆန်းသစ် reel ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း, Nexans တူရကီ & အလယျပိုငျး၏ CEO ကိုဖိတ်ကြား 40 အကြောင်းကိုပါဝင်ခဲ့ထားပါတယ် [ပို ... ]
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကနျြးမာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအဖွဲ့များ, ရေယာဉ်စုစုပေါင်း 35 176 တထောင်ပေါင်ပြစ်ဒဏ်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှစ်ခုအဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကနျြးမာရေးဌာနခွဲ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန [ပို ... ]
မိမိတို့အမြင်အာရုံပြင်ဆင်ထားရန်ချင်ပါတယ်ဘယ်လောက် izban တစ်ဦးသဘောသဘာဝကိုစီးဖို့အကြီးတင်းကိုကြားပြောသော Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ Izel ယောက်ျားသည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Izel bearing သူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများသဘာဝမှအထိခိုက်မခံဖြစ်, izban'l ခရီးသွားလာခရီးသည်တစ်ဦးအံ့အားသင့်လုပ် [ပို ... ]
စိတ်အားထက်သန်စွာ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုအနီးကပ်နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစီမံကိန်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဘာတွေလဲ? နုကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အခါ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, အစ္စတန်ဘူလ်တူးမြောင်းအတွင်းကျင်းပမည့်ဖြစ်ပါသည်စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်? Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကို [ပို ... ]
အဆိုပါ Sivas Castle Project မှတန်ဖိုးပေါင်းထည့်တံ့သော Sivas မြို့တော်ဝန် Hilmi Bilgin, ဆိုက်၏လယ်ပြင် bulunarak စာမေးပွဲအတွက်စေ့စပ်ထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ဆက်လက်ပေါင်းစည်းတံ့သောမိုဃ်းကောင်းကင်ကို Castle စီမံကိန်းအတွက်ဂရိတ်ဗလီနှင့် Madrasa တဦးတည်းလက် [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အနှေး Mansur ၏ညီလာခံမှာကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား, တူရကီအတွက် Esenboga လေဆိပ်မှာမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်များအတွက်မြို့လယ်ရှင်းပြချက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားစဉ်အတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Will Esenboga လေဆိပ်မှာနှင့်အတူဇူလိုင်လ 15 Kizilay ရင်ပြင်အကြားမက်ထရိုစီမံကိန်းအား [ပို ... ]
တစ်ကြိမ်မှာအမှားအယွင်းများတားဆီး၌ပြစ်မှားမိလက်ျာဘက်အမှုအရာပေးမြေပြင်အနေအထားမော်တော်ယာဉ်များ, cartography များတွင်အသုံးပြုရဒေီယိုနည်းပညာနှင့်အတူဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ကိုထိန်းချုပ်။ အဆိုပါ GNSS စနစ်များနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်နေရာချဖို့အသုံးပြု 3B ဂျစက်ယန္တရားအပေါ်အခြေခံပြီး [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုင်းများအတွက် အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများအားဖြင့် operated နောက်ဆုံးရေးသားချိန်။ တူရကီ Eskisehir ယခုအစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား - တူရကီနှင့် Konya လမ်းကြောင်းအတွက်အလွန်မြန်ဆန်စွာခရီးသွားလာ [ပို ... ]
အဆိုပါထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်များတွင်အသုံးပြု Compressor ၏အလုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့နည်းစေသည်။ အသီးအသီးအမှတ်တံဆိပ်တွန်းစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်မှုအတွက်သံ Compressor နှင့်အတူပြည့်စုံန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တူရကီ7/ 24 ဝန်ဆောင်မှုပြုပြင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအမှတ်မှာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့က [ပို ... ]
Manisa မြူနီစီပယ်, 2019-2020 ပိုမိုလွယ်ကူစွာနဲ့သွားကြဖို့တစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းအတွက်ရန်အလို့ငှာ 303 နှင့် 304 ရေတွက်လိုင်းများကျောင်းကို Morphou ရပ်ကွက်အားဖြင့်၎င်း, ဝန်ဆောင်မှုန်းကျင်ကြီးစိုးနေကြသည်သေချာဖို့ပညာသင်နှစ်ရဲ့ start စာရင်းဝင်ရက်ပေါင်းဤကျောင်းများ၏ကျောင်းသားများအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရန် [ပို ... ]
rayhab 28.08.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
ရော်ဘာ Coating အဆင့်အပေါ် Crossing စီးပွားရေးမော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိပေါ့ပါး-Ulukışlaစခန်းများလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လမ်းမကြီးန်ဆောင်မှုများ Aggregate Keeping ဖြစ်လိမ့်မည်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်အလားတူမီးရထားသတင်းများလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအကျိုးစီးပွားအခြား haberlerrayhab ၏ဖြစ်နိုင်သည် 09.01.2019 တင်ဒါဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်က Metro ကစီစဉ် 24 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်။ အဆိုပါရထားယာဉ်မောင်းပညာရေးဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu brevets ထံမှ term ရရန် 66 စက်လုပ်သမားရဲ့လက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ပုရထားယာဉ်မောင်းပညာရေးအစီအစဉ် 24 ကစီစဉ် Metro အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ဦး Affiliate ။ ကာလကြီးစွန်း [ပို ... ]
ကျောင်းစာအုပ်န်ထမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အငှားယာဉ်များ, minibuses ဒေသခံကူးတို့ဖွငျ့တရားစွဲဆိုအသစ်သောအခွန်နှင့်အတူတက္ကစီစာချုပ်သက်တမ်းကုန်။ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေအတွက်Xnumx'lükရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာသည်ကျောင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများဖန်ဆင်းတော်မူပြီနေစဉ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) က [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဌာန, Çorluအတွက်မီးရထားဘေးအန္တရာယ်အပေါ်အစီရင်ခံစာတင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 416 နိုင်ဘူး။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာသည်ဝန်ကြီးဌာနက, ပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာ '' ပုံမှန် '' ရထားဘေးအန္တရာယ်နှင့်အတူပါဝင်ပညာရှင်များ၏သဘောထားမှာတော့အစောပိုင်း detection နဲ့စနစ်ကခေတ်မီ၏မရှိခြင်းလည်း, ဝန်ခံခဲ့သည် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြှင့်! အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ekrem İmamoğlu, Metro, Metrobus နှင့် IETT အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်ရှင်းပြခဲ့ဘူး! IETT အစ္စတန်ဘူလ်က Metro, Metrobus ဘယ်လောက်လိမ့်မည်စျေးနှုန်းများကြီးပြင်း? ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်နောက်ဆုံးမိနစ်များတွင်zamlanıyပါ! [ပို ... ]